शीतल गिरीको सालिक सार्वजनिक
बैशाख २८, २०७६ रुपिन्द्र प्रभावी
पोखरा । मुक्तककार शीतल गिरीको पहिलो कृति `सालिक´ मुक्तक सङ्ग्रह शनिबार पोखरामा सार्वजनिक भएको छ ।
मुक्तक मञ्च पोखराको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरुभक्तले कृतिको लोकार्पण गरेका हुन् । मुक्तकलाई गागरमा सागर अटाउने विधाका रूपमा चर्चा गर्दै मुक्तक लेखन चुनौतीपूर्ण रहेको सरुभक्तको भनाइ थियो । उनले शीतलको सालिकले पोखरेली मुक्तक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
मञ्चका अध्यक्ष प्राञ्जलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुक्तककार गिरीले आफूले लेखेको कान्छो विधा भए पनि मुक्तकले बढी आकर्षण गरेको हुनाले पहिलो किताब मुक्तककै निकालेको बताए । `मबिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा...´ बोलको गजलबाट लोकप्रियता हासिल गरेका गिरीका डेढ दर्जन गीत/गजल रेकर्ड भएका छन् ।
कार्यक्रममा मुक्तककारको परिचय साहित्यकार मन क्षेत्रीले दिएका थिए भने प्रकाशक बी. एन. पुस्तक संसारका प्रबन्धक सूर्य बीसीले गिरीका मुक्तक मन परेर छापेको बताएका थिए । उपाध्यक्ष भरतराज पौडेलको स्वागतमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रामजीप्रसाद आचार्यले गरेका थिए । सालिकभित्रका मुक्तक श्रीराम अधिकारी र अनिता दाहालले वाचन गरेका थिए ।
शनिबार नै मञ्चको नियमित मुक्तक वाचनको १३२ औं शृङ्खला पनि सम्पन्न भएको छ ।
शनिवार, बैशाख २८, २०७६, ०७:०५:००
जेठ ४, २०७६ रुपिन्द्र प्रभावी
जेठ ३, २०७६ रुपिन्द्र प्रभावी